DEG DEG:Qaar kamid ah Culimada Soomaaliyeed oo warkii ugu cuslaa kaga dhawaaqay Garoowe & dagaalada Puntland Iyo Somaliland… | Puntland
DEG DEG:Qaar kamid ah Culimada Soomaaliyeed oo warkii ugu cuslaa kaga dhawaaqay Garoowe & dagaalada Puntland Iyo Somaliland…
Culimadda Ictisaam ayaa dadaal ugu jira in ay dhex dhexaadiyaan Puntland iyo Somaliland, Culumo ka tirsan Jameecada Ictisaam ayaa xalay Garowe baaq nabadeed oo ay ka wadaan Culumada iyo Ganacsada Soomaliland ugu soo bandhigay Odayaal iyo waxgarad Shir ku lahaa Hotel magaalada Garowe ku yaal.
Ilo lagu kalsoonaan karo oo Goob joog ahaa ayaa Puntlandonline.net u sheegay in Odayaashii iyo waxgaradkii Goobta joogay ay u sheegeen in Culumada iyo Ganacsada Soomaliland ay madaxwayne Biixi ka haystaan kalsooni buuxda oo ah in uu Aqbalayo heshiis walba oo nabadeed oo loo soo jeediyo isla markaana ay doonayaa in dhinaca Puntland laga helo ogolaansho wada hadalo nabadeed .
Qaar ka mid ah odayaashii goobta joogay ayaa arintaasi ka biyo diiday walow markii dambe loo sheegay wadaadadii in ka shaqaynta nabadu wax wanaagsan tahay balse aysan hada go’aan arintaasi ku saabsan aysan siinayn madaama uusan go’aanka wada hadal nabadeed in la bilaabo uusan iyaga ka go’in ayse u soo jawaabi doonaan .
Arintaan ayaa noqonaysa isku daygii ugu horeeyey ee wada hadal nabadeed oo beesha calamka ka madax banaan oo la bilaabo ilaa markii uu dagaalku ka dhex qarxay Puntland iyo Somaliland.
Dadaaladaan Nabadeed ee wadaan Culimadu ayaa ku soo beegmayaa iyadoo Shalay Puntland ay sheegtay inaysan wax wadahadal iyo gorgotan ah ka gali dooniin deegaanadeeda Islamarkaan ay maamulka Jeegaanta ka sifayn doonaan,Islamarkaana wada hadal Soomaliland dhexmarna Shuruud uga dhigtay in ay ka baxaan Gobolka Sool.
Lama saadalin karo halka uu ku dambayn isku daygaas nabadeed ee bilowga ah ee Culumada labada dhinaca iska kaashanayaan iyadoo xiisad xoogan ay ka taagan tahay deegaanka Tukaraq iyo Guud ahaan Gobalka Sool.